Nhau-Rech Chemical Co Ltd.
Kushandiswa kwesimbi sulfate musimende
Ferrous sulfate monohydrate inonyanya kushandiswa seye inoderedza mumiriri muindasitiri yesimende kuitira kuti uwane Cr (VI) yezvinhu zvisingasviki 2 mg / L. Mune 30% monohydrated fomu, ferrous sulfate ndiyo prime inoshandiswa nemusika wesimende kudzikamisa hexavalent chromium. Ichi chigadzirwa ndiyo yakanyanya kuvimbika uye yakachena imwe nzira iyo vagadziri ve samende vanogona kushandisa zvine chekuita nedzimwe sarudzo pamusika.
MUENZANISO KUNONOKESA ZVIZVI
Nekuda kwe COVID-19 denda, zvirambidzo zvekufamba, uye kusagadzikana kuri kuitika pasirese, EUROTIER 2020 uye VIV ASIA 2021 inoshandura karenda yayo yekuratidzira kuti ibudirire kuratidzira kwakabudirira pakati penzvimbo mukati megore rakakodzera ra2021.
ITSVA WEBSITE VERSION YEMAHARA CHEMICAL
Kupa yepamusoro-soro uye inoshanda zvakanyanya vatengi, RECH CHEMICAL yakagadzirisa iyo nyowani vhezheni yewebhusaiti kubva zvino zvichienda mberi. Kutarisira mberi kune rutsigiro kubva kune vatengi senguva dzose. Tichagara tichipa yakanakisa sevhisi.
[email inodzivirirwa] [email inodzivirirwa]